काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तलाई न्याय दिलाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन् । बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका निर्मलाका बाबु यज्ञराज र आमा दुर्गादेवीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले प्रहरी अधिकारीबाट निर्मला
डा.भट्टराईलाई अमेरिकामा कालो झण्डा
टेक्सास । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईलाई अमेरिकामा भन्दै कालोझण्डा देखाइएको छ । टेक्सासको डालसमा शनिबार नेपाली समुदायसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका लागि पुगेका भट्टराईलाई तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व बेला गरेको हिंसा र जथाभावी सर्वसाधारणको
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्यामा सङ्लग्न अपराधीलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित पक्षसित आग्रह गरेकीछिन्। उनले भनिन्, “ढिलो गरी न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनु सरह हो’ भन्ने मान्यतालाई गम्भीरतापूर्वक मनन् गरी हत्यामा
काठमाडौं । सेवामूलक संस्थाहरूले नाफा भन्दा सेवामा जोड दिनुपर्ने उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री मातृका यादवले बताएका छन् । बुधवार काठमाडौंमा साल्ट टे«डिङ कर्पाेरेसनको ५६ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै यादवले सेवा गर्ने संस्थाहरूले नाफा आर्जन गर्दा आपूर्तिमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । कर्पाेरेसनले
प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी छन् । सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाइ शपथ गराइएको हो । हिजो बिहान सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समिति बैठकमा मिश्रले न्यायालय
समृद्ध नेपाल हेर्ने भारतको चाहना छःप्रचण्ड
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भारतले नेपाल समृद्ध भएको हेर्न चाहेको बताएका छन्। चार दिने भारत भ्रमणबाट स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै आफ्नो भ्रमणले दुई देशबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयमा वल पुग्ने बताए
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरेकी छन् । आइतबार बिहान राष्ट्रपति निवासमा एक समारोहकाबीच दज्र्यानी चिन्ह प्रदान गरेकी हुन्। उक्त समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, रक्षामन्त्री ईश्वर
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान मन्त्रिमण्डल तत्काल हेरफेर हुने कुनै सम्भावना नरहेको बताएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपालले आज आयोजना गरेको प्रथम राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई अस्थिर बनाउन चाहनेले मन्त्रीहरु हेरफेर हुने हल्ला चलाएको उल्लेख
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले प्रेस सम्बन्धि संविधानप्रदत्त कानुन विपरितको व्यवस्था आवश्यक नभएको बताएका छन् । सरकारले संविधानले दिएको अधिकार विपरित ल्याइएको नियमले प्रेस कुण्ठित हुने उनले बताए । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष केसीले भने,‘मौलिक
नवीन घिमिरे अख्तियार प्रमुखमा सिफारिश
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा पूर्व गृह सचिव नवीन घिमिरे सिफारिश भएका छन् । अख्तियारका कार्यवाहक प्रमुख समेत रहेका घिमिरेलाई बुधबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सिफारिस गरेको हो । अख्तियार प्रमुख दीप बस्न्यातले फागुनमा अवकाश पाएपछि घिमिरे अख्तियारको कार्यवाहक भएका थिए
विकास निर्माणमा गुणस्तरहीन काम पाइए कर्मचारी र ठेकेदारमाथि कारबाहीःमन्त्री महासेठ
मोरङ । निर्माणको जिम्मा लिएर समयमै काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले बताएका छन् । निर्माण व्यवसायी संघ मोरङले सोमबार विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले कतिपय ठेकेदारको लापरबाही कारण आयोजना निर्माण अलपत्र भएको भन्दै जिम्मा लिएर
नयाँ ऐनको विरोधमा निजामती कर्मचारी
काठमाडौं । निजामती कर्मचारीले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयक– २०७५ संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । विधेयकमा समेटिएका केही प्रावधानले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध गर्ने भन्दै नियम सच्याउनु पर्ने उनीहरूको भनाई छ । कतिपय प्रावधान जस्ताको त्यस्तै पास भए निजामती सेवालाई सुदृढीकरण गर्ने, सेवा
१८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै बिमेस्टेक सम्मेलन सम्पन्न
काठमाडौं । बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी मुलुकको प्रयास (बिमस्टेक) चौथो सम्मेलन १८ बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । बिहीबारदेखि काठमाडौंको सोल्टी होटलमा आयोजित सम्मेलन काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्मेलन सम्पन्न भएको हो। समापन समारोहमा प्रधानमन्त्री
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको ‘कनेक्टिभिटी’ अफर !
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूबीच ‘कनेक्टिभिटी’ जरूरी भएको बताएका छन् । कुनैपनि राष्ट्रले एक्लाएक्लै विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने भन्दै यस्तो कनेक्टिभिटी आवश्यक भएको मोदीको भनाइ छ । बिहीबार काठमाडौंमा सुरू बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन
चोथौं बिमस्टेक सम्मेलन सुरू हुँदै,सदस्यराष्ट्र प्रमुख काठमाडौंमा
काठमाडौं । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलन बिहिबार अपराह्न काठमाडौंमा आरम्भ हुँदैछ । कार्यक्रमको बिमस्टेकका अध्यक्ष एवम् नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने छन् । सम्मेलनमा भाग लिन सदस्य राष्टरूका प्रमुखहरू काठमाडौं
बिमस्टेक मन्त्रिस्तरीय बैठक जारी , काठमाडौं घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिइने
काठमाडौंं । बिहीबारबाट हुने बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को १६औँ मन्त्रीस्तरीय बैठक काठमाडौंमा सुरू भएको छ । वैठकले सचिव स्तरीय बैठकले पारित गरेको प्रतिवेदनका आधामा काठमाडौं घोाषणा पत्र तय गर्न बिमस्टेका स्तरीय मन्त्रीबीच छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले
काठमाडौं उपत्यका शिक्षण संस्थामा २ दिन विदा,यातायातमा भोलिबाटै जोर विजोर प्रणाली
काठमाडौं । सरकारले बिमस्टेकको सम्मेलन हुने दिन १४ र १५ गते काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालय र कलेजमा विदा दिने निर्णय गरेको छ । बिमस्टेक सम्मेलनमा आउँने विदेशी पाहुनाको सवारीलाई सहज बनाउन शिक्षण संस्था विदा दिने निर्णय गरिएको हो । गृहमन्त्रालयको सुरक्षा महाशाखामा मंगलबार बसेको सम्बन्धित निकायको बैठकले
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज संसद्मा सम्बोधन गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताका लागि बङ्गालको खाडीका देशहरूको प्रयास (बिमस्टेक)को १९औँ शिखर सम्मेलन तयारीलगायतका विषयमा सम्बोधन गर्ने तयारी छ । आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री
अब कर्णाली प्रदेश सरकारको वैठक ‘पेपरलेस’ हुने
दिपेन्द्र शर्मा/सुर्खेत, कर्णाली प्रदेश सरकारले शनिबारदेखि मन्त्रीपरिषद् वैठक विद्युतीय प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारका कामकारवाहीलाई सरल, प्रभावकारी, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने लक्ष्यले ‘पेपरलेस’ वैठक सञ्चालन गर्न लागिएको हो । कामकाज गर्न छिटोछरितो होस भनेर डिजिटल प्रविधि अवलम्बन
कञ्चनपुर घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन प्रदेश सरकार कटिबद्ध छः अर्थमन्त्री,झपट वोहरा, प्रदेश नं ७
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ उल्टाखामकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको १ महिना पुगेको छ । घटनाको सत्यतथ्य छानबिनको जिम्मा पाएको केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले घटनाको २५ औं दिनमा स्थानीय दिलिपसिंह विष्टलाई दोषीका रुपमा उभ्यायो । मानसिक स्थिति समेत ठिक नभएका
कर्णालीमा ७७ प्रतिशत किशोरी अझै छाउगोठमै
दिपेन्द्र शर्मा/सुर्खेत कर्णाली प्रदेशमा ७७ प्रतिशत किशोरीको अझै छाउगोठमा बस्ने गरेको पाइएको छ । छाउपडी उन्मूलनका लागि सरकारी एवम् गैर सरकारी क्षेत्रबाट अभियानकै रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि कर्णालीमा त्यो प्रभावकारी देखिएन । एक्सन वक्र्स नेपाल संस्थाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा ७७ कर्णाली
खबरदारी जुलुसमाथि प्रहरीद्वारा गोली प्रहार, १ को मृत्यु, ३ घाईते
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ उल्टाखामकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै शुक्रबार महेन्द्रनगरमा भईरहेको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा एक जनाको मृत्यु हुनुका साथै तीन जना घाईते भएका छन् । प्रहरीको गोली लागि १४ वर्षीय चेतन भट्टको मृत्यु भएको हो । प्रहरीले
छानबिन टोलीले अनुसन्धान थाल्यो,कञ्चनपुर शान्त बन्दै
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ उल्टाखामकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनाको छानबिन गर्न गठित टोली शुक्रबार महेन्द्रनगर पुगेर अनुसन्धान थालेको छ । यससँगै प्रहरीको अनुसन्धानप्रति असनतुष्ट स्थानीय आन्दोलनको आन्दोलन मथ्थर भएको छ । प्रहरीले अनुसन्धानले वास्तविक
शिक्षा समिति काभ्रे विरुद्ध शिक्षक संघ आन्दोलनमा
बनेपा । जिल्ला शिक्षा समिति काभ्रेले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको काज सरूवा वदर गरेपछि नेपाल शिक्षक संघ काभ्रे आन्दोलित भएको छ । समितिको भदौ ३ गतेको निर्णय आम शिक्षकको हित विपरित भएको भन्दै त्यसका विरुद्धमा संघका पदाधिकारी सहित शिक्षकहरूले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई काभ्रेलार्ई ज्ञापनपत्र बुझाएका
कञ्चनपुरका सिडियो र प्रहरी प्रमुख फेरिए
काठमाडौं । बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणको घटनाले उग्र रुप लिएपछि गृहमन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्का र प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्टलाई फिर्ता बोलाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार खड्काको स्थानमा तारानाथ अधिकारी र विष्टका ठाउँमा कुवेर कठायतलार्इ पठाइएको छ। घटनाको
महेन्द्रनगर तनावग्रस्त, वडा नं १८ र ४ मा कर्फ्यु
कञ्चनपुर । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटनाले बिहीबार पनि कञ्चनपुर अशान्त बनेको छ । हत्या र बलात्कारीको पहिचान हुनुपर्ने भन्दै स्थानीयवासीले गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाएपछि चार जना घाइते भएका छन् । घटनामा तीर्थप्रसाद पनेरू, अर्जुन भण्डारी, सन्तोष कठरिया र तेज भट्ट घाइते भएका हुन् । स्थानीयका
राजनीतिबाट कुनै पनि लाभ लिन्नःप्रधानमन्त्री ओली
दमक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले राजनीतिबाट कुनै पनि लाभ नलिने भन्दै मुलुकको हितका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन् । बुधबार मोरङको पथरीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै यो देश शासकको बेइमानीले विकासपछि परेको बताए । उनले भने,‘अहिलेको सरकारले विकासको रफ्तार अघि बढाएको छ अब मुलुक छिट्टै
सिरहावासीलाई खुसीको खबर
ललीतपुर । नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले सिरहा जिल्लावासीलाई उपचारमा विशेष सहुलियत दिने भएको छ । मंगलबार सिरहा समाज सेवाका अध्यक्ष विष्णुकुमार साह र अस्पतालका महाप्रबन्धक विजय रिमालले सेवा सहुलियत सम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । देशभित्र नै सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य
समाजको कालो धब्बा,बलात्कारका घटना बढ्दै
सरस्वती ढुङ्गाना/काठमाडौं महिला हिंसा न्यूनिकरणका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले करोडौं रकम खर्चिएपनि त्यसमा कमी आएको छैन् । पछिल्ला वर्षमा नेपालमा महिला हिंसाका घटना बलात्कार, महिला बेचविखन, घरेलु हिंसा,मानसिक तथा शारीरिक यातनाका घटनामा कमी आउनुको सट्टा बढ्दै गएको तथ्याङ्क छ । यसमा पनि
कालीमाटी तरकारी बजारमा बवाल,अनुगमनकर्ता थुन्ने व्यापारी प्रहरी नियन्त्रणमा
काठमाडौं । तरकारी बजार अनुगमनमा गएका सरकारी टोलीका प्रतिनिधिलाई थुनेको अभियोगमा प्रहरीले कालिमाटीस्थित तरकारी व्यवसायीका नेतालाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटीका प्रहरी टोलीले कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी संघका अध्यक्ष भरत खतिवडालाई पक्राउ गरेको हो । सरकारी टोलीलाई नियन्त्रणमा